Ny poketra nomerika sy ny ho avin'ny fandoavam-bola | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 1, 2011 Alarobia, Novambra 30, 2011 Douglas Karr
Amin'ny 2011, ny isan'ny fifanakalozana fandoavam-bola amin'ny finday eran'izao tontolo izao dia hahatratra $ 241 miliara fa amin'ny 2015, antenaina hihoatra ny $ 1 tapitrisa! Tsy isalasalana fa izany no mahatonga ny orinasa mpana carte de crédit rehetra sy ny vavahady fandoavam-bola an-tserasera miasa mafy amin'ny fampiasam-bola an-jatony tapitrisa dolara Akaiky akaiky ny serasera teknolojia sy fomba fandoavam-bola.
Miaraka amin'ny fielezan'ny tambajotra broadband sy ny finday, ny fomba fandoavantsika zavatra dia antenaina hiova tanteraka mandritra ny taona vitsivitsy. Izahay dia avy amin'ny akorandriaka sy vakana amin'ny volavolan-taratasy amin'ny carte de crédit etsy sy eroa mandritra ny arivo taona vitsivitsy.
amin'ny alalan'ny Intuit
Tags: kitapom-batsy nomerikafandoavam-bola amin'ny findayfifandraisana akaiky eny an-tsahanfc